Isityalo senziwe ngenkqubo yokubethelwa, inkqubo yokulinganisa, inkqubo yokuxuba, inkqubo yolawulo lombane, inkqubo yolawulo lwomoya kunye nokunye njl.I-aggregates ezintathu, i-powders enye, enye ye-liquid additive kunye namanzi anokukalwa ngokuzenzekelayo kwaye axutywe sisityalo.
Isityalo senziwe ngenkqubo yokubethelwa, inkqubo yokulinganisa, inkqubo yokuxuba, inkqubo yolawulo lombane, inkqubo yolawulo lomoya kunye nokunye okuhlanganisiweyo, iipowder, isongezo samanzi kunye namanzi anokukalwa ngokuzenzekelayo kwaye axutywe sisityalo.
Isiseko sesakhiwo sasimahla, izixhobo zinokufakwa kwimveliso emva kokuba indawo yomsebenzi ilungisiwe kwaye yomelele. Ayisi kunciphisi kuphela iindleko zokwakha, kodwa ikwanciphise umjikelo wofakelo
Umgaqo kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu unikezele ngesityalo sokubambisa ikhonkrithi
Ukwamkela umxube wokusebenza okuphezulu, ukusebenza kwemveliso ephezulu, ukuxhasa iintlobo ezininzi zetekhnoloji yokutyisa, efanelekileyo kwiimfuno ezahlukeneyo zokuxuba ikhonkrithi, iibhodi zelining kunye neelade zamkela izinto ezinganyangekiyo kunye nengxubevange, kunye nobomi benkonzo ende.
Feeder oxwesileyo luhlobo yokuthutha womoya kunye nesakhiwo phambili, iye ukusebenza eliphezulu ukothula ngokusebenzisa fluidization kunye noxinzelelo feed feed kunye nebhedi eyodwa fluidized.
I-SjGJD060-3GUhlobo olunyusiweyo lwesityalo esingumileyo sokwenza umthambo
I-SjGJD060-3G inyathele-uhlobo udaka owomileyo izixhobo zokubamba zamkela uhlobo lwenyathela, eneempawu zemveliso enkulu, uzinzo kunye nokuthembeka, kwaye inokusetyenziselwa ukuxuba udaka oluqhelekileyo olomileyo kunye nodaka olukhethekileyo.
[Ikopi] Umahluli wesanti
Ukwamkela itekhnoloji yokudibanisa yokwahlula igubu kunye nokuhlola okwahlukileyo kunye nokwahlukana, kunye nokuqhubeka nokwahlulwa kwelitye lentlabathi; ngesakhiwo ngokulula, ukwahlula kakuhle ukusebenza, iindleko eziphantsi zokusebenzisa kunye nesibonelelo esihle sokhuselo lokusingqongileyo.
Eziphathekayo Umxhubi wetrakhi 4 × 2
I-Shantui Janeoo iye yaphuhlisa kwaye ivelisa umxube wekhonkrithi weloli ukusukela ngeminyaka yoo-1980. It iqokelele amava atyebileyo kuyilo, ukuvelisa kunye nenkonzo emva kokuthengisa.
SjGTD060-3G Tower Uhlobo Dry basemgongxweni Batching Plant
I-Sjgtd060-3g izixhobo zodaka ezomileyo zisebenzisa isakhiwo senqaba, ngemveliso enkulu, ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo, iimpawu ezizinzileyo nezinokuthenjwa, ezisetyenziselwa ukuxuba udaka oluqhelekileyo olomileyo.
Eziphathekayo Umxhubi wetrakhi 6 × 4